Bahanan’i Tiorkia Ny Twitter, YouTube, Tranonkala Marobe Taorian’ny Famonoana Mpampanoa Lalàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Avrily 2015 2:31 GMT
Vakio amin'ny teny English, čeština , বাংলা, Español, Magyar, English
Voabahana indray ny Twitter sy YouTube ao Tiorkia nanomboka androany (6 Aprily), taorian'ny nivezivezen'ireo sary mikasika ilay fakàna takalonaina izay niafara tamin'ny fahafatesan'ilay mpampanoa lalàna avy ao amin'ny governemanta. Araka ny Hurriyet Daily News, nobahanan'ny manampahefana ihany koa ny tranonkala 166 izay nandefa ireo sary ireo.
Taorian'ilay fahatapahan'ny herinaratra efa nila ho nahenika ny firenena iray manontolo ny marainan'ny 31 Martsa, nanomboka nivezivezy tao amin'ny Twitter ireo sarin'i Mehmet Selim Kiraz, mpampanoa lalàna, miaraka amin'ny basy natohoka tamin'ny lohany. Nalain'ireo milisy mpomba ny hery ankavia ho takalonaina i Kiraz, tao amin'ny tranon'ny fitsaràna tao Istambul, ary notànana nandritry ny ora maro tamin'ilay raharaha izay niafara tamin'ny fahafatesan'ny roa tamin'ireo mpaka an-keriny azy sy i Kiraz tenany ihany koa, nony alimbe, taoran'ny firotsahana an-tsehatry ny hery manokan'ny polisy.
Lasa olona nanana ny lazany i Kiraz taorian'ny nanendrena azy hisahana ny raharaha Berkin Elvan, ilay tovolahy maty taorian'ny nahafaty azy noho ny niantefàn'ny kapoakanà entona mandatsa-dranomaso teny amin'ny lohany, tifitra nataon'ny polisy nandritry ny hetsi-panoherana tao amin'ny Kianja Gezi tamin'ny 2013. Tsy nampihetsi-bolomaso ny filoha Erdogan (Praiminisitra tamin'izany) ny nahafatesan'ilay tovolahy ary sahiny aza ny nandroso ny hoe mety ho niara-niasa tamin'ny fikambanana mpampihorohoro ilay tanora, izay tsy nandray anjara akory tamin'ilay hetsi-panoherana.
Kiraz no olona faha-efatra nandray an-tànana ny raharaha Elvan, saingy misy miteny fa izy no voalohany nahavita dingana tamin'ny famantarana ireo tomponandraikitra tamin'ilay famonoana. Na eo aza ny fahafatesan'i Kiraz, ireo solontenam-panjakana, hatramin'ny filoha Erdogan, dia samy niarahaba ireo manamboninahitry ny polisy izay nandray anjara tamin'ilay hetsika ary namaritra azy iny ho “fahombiazana”.
Ora vitsy taorian'ny nakàna an-keriny an'i Kiraz, nanomboka nivezivezy tao amin'ny Twitter ireo sarin'i Kiraz voatondro basy eo amin'ny lohany. Voalaza ho avy amin'ireo naka an-keriny azy, sary navoaka voalohany tamin'ny alàlan'ny kaonty iray izay naato fotoana fohy taorian'ny nivoahan'ireo sary. Ny ampitson'io, 1 Aprily, media 13 mpamoaka vaovao no noraràna tsy hanatrika ny fandevenana ilay mpampanoa lalàna, satria nolazaina fa namoaka ireo sary ireo ry zareo. Ny andro nitrangan'ilay antambo, noteren'ireo manampahefana ireo tambajotram-pahitalavitra mba hampitsahatra ny fampitàna mivantana avy eo ivelan'ny tranon'ny fitsaràna.
Tsy nahatohina ireo Tiorka mpisera amin'ny aterineto ity sivana maimaika ity – raha ny marina, efa mpitranga izany tany aloha tany. Toa anatin'ny hazakazaka hifidianana izay ho filoha tamin'ny Martsa 2014, nobahanan'ny manampahefana ireo sehatra media sosilay goavana rehetra, taorian'ny nivezivezen'ny rakipeon'ny resaky ny Praiminisitra tamin'izany fotoana sy ny zanany lahy Bilal momba ny tokony hanafenana ireo vola dolara an-tapitrisa. Tratra tamin'izany ihany koa ireo olona akaiky azy – ilay rakipeo niporitsaka dia nanondro ny fisianà kolikoly midadasika be ao anivon'ireo mpikambana ao amin'ny antoko AKP, ireo namany, sy ireo tale jeneraly samihafa. Mba hampihenana ny korontana ataon'ny vahoaka sy ny fanarahana maso dia naleon'ny manampahefana mibahana YouTube sy Twitter.